South Asia and Beyond: #IamwithDrKC असार २८ अपडेटः यसकारण सत्ता परिवर्तनले फरक पार्दैन अभियानलाई
#IamwithDrKC असार २८ अपडेटः यसकारण सत्ता परिवर्तनले फरक पार्दैन अभियानलाई
सरकारबाट एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिएर राजनीतिक अन्योल सिर्जना भएको छ । तर यसले अभियानलाई क्षणिकभन्दा बढी असर नपार्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
कारण १ः यो अभियान एउटा पक्षका निश्चित माग अर्को पक्षले पूरा गर्नेभन्दा पनि यो एजेण्डामा अधिकाधिक मानिसहरुको ध्यान तानेर समग्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउनमा केन्द्रित छ । क्षणिक रुपमा प्राथमिकताबाट हट्नु भनेको केही समय मानिसको ध्यान यसबाट हट्नु हो तर समग्र आन्दोलने सिर्जना गरेको तरंग जारी छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरुसँग हाम्रो अन्तक्रिया अझै जारी छ र त्यसले तार्किक निश्कर्षको बाटो समात्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
कारण २ः अहिलेको सरकार ढलिहाले पनि छिट्टै कुनै प्रक्रियाद्वारा अर्को सरकार बन्नुको विकल्प छैन र नयाँ बन्ने सरकारले डा केसीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नगरी धर पाउने छ्रैन ।
कारण ३ः अभियानमा संलग्न हामी अधिकांश मानिसहरु राजनीति वा सत्ता राजनीतिसँग टाढाको सम्बन्ध पनि राख्दैनौं। त्यसैले हामी आफ्ना कदमहरुमा झन् एकाग्रताका साथ लागिरहेका छौं ।
केही दिनमा डा केसीको स्वास्थ्य ओरालो लाग्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै आउँदो शनिवार राज्यलाई धक्का पुग्ने गरी कार्यक्रम गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । त्यसको विस्तृत विवरण भोलि सार्वजनिक हुनेछ तर हजारौंको संख्यामा नागरिकहरु जुटाएर संसदलाई सन्देश दिने गरी कार्यक्रम हुनेछ । त्यसका लागि आआफ्नो ठाउँबाट तयारी गर्न र सहभागिता बढाउन अभियानमा संलग्न सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
पछिल्लो समय अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले यो विषयमा भ्रम सिर्जना गरेर ध्यान अन्यत्र मोड्ने सबै कोशिस गरेका देखिएको छ । तर उनले प्रयोग गर्ने सञ्चार माध्यमहरुको विश्वसनीयता अत्यन्त न्यून भएका कारण समाचार भनेर बनाइएका सामाग्री आख्यानजस्तो भइदिएको भन्ने टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । त्यसले अन्ततः उनी आफैंलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
पत्रकारिता होइन कथाकारिताको क्या मीठो धूनसहितको धमाकेदार सिर्जना ! वाह् रे लाल रङ !https://t.co/p6SU0rMKz3
— CP Aryal (@CPAryal) July 12, 2016
रातोपाटीले ग़ज़बको सनसनीखेज कथा निर्माण गरेछ । तथ्य नचाहिने, पुष्टि गर्न लेठै गर्नु नपर्ने ! https://t.co/FYXQvyUoZV
— Pradeep K Gyawali (@PradeepgyawaliK) July 12, 2016
म जादै नगएको कार्यक्रममा त मेरो उपस्थिती देखेछ रातोपाटीले, बाँकी समाचार को हालत के होला! https://t.co/rw3tj5Utuu
— Ameet Dhakal (@ameetdhakal) July 12, 2016
अन्तमा, मिडियामा नआइकनै पनि लामो समयदेखि भ्रष्टाचार निवारण र मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा संलग्न संघसंस्थाहरु तीव्रताका साथ डा केसी नेतृत्वको अभियानमा संलग्न भइरहेका छन् । त्यसले झट्ट आम नागरिकको ध्यान नतान्ने तर समाजलाई खोक्रो बनाउँदै लगिरहेका खराब प्रवृत्तिविरुद्ध निरन्तर चलिरहेका अभियानहरुलाई पनि गति दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अन्तमा आगामी शनिवारको कार्यक्रमका लागि तयारी गर्न तथा सहभागिता बढाउने रचनात्मक तरिकाहरु सोच्न आग्रह गर्दै,
हाल अभियानमा सक्रिय रुपमा संलग्न पक्षहरुः
नेशनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोशिएसन
नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट्स सोसाइटी
हामी नेपाली अभियान
ऐक्यबद्धता जनाएका पक्षहरु
राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठन
नेशनल डक्टर्स एसोशिएसन
Posted by Jiwan Kshetry at 9:02 PM
Labels: Accountability, Dr. Govinda K C, Fast onto death, Lokman Singh Karki